PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - UMotaung ujabulela ukubuya kukaGordinho
UMotaung ujabulela ukubuya kukaGordinho
UBOBBY Motaung, imenenja yeKaizer Chiefs, ilindele lukhulu kumdlali wayo uLorenzo Gordinho obuyele kuMakhosi ngemuva kwesizini ebolekiswe kwiBloemfontein Celtic.
UMotaung ucashunywe kwi-website yeChiefs eveza ukuthi uGordinho, odlala emuva maphakathi, uqale ukuzilolonga nozakwabo izolo.
“ULorenzo ubuya ngesikhathi esihle kakhulu ngoba silinyalelwe abadlali abambalwa. Uthole ithuba eliningi lokudlala kwiBloemfontein Celtic. Ngenxa yalokho uthole amava amaningi,”kusho uMotaung, ebonga iCeltic ngokubaqinisela ukhakhayi kumdlali abamkhulisile.
“Ibe mihle kakhulu le minyaka emibili kuye futhi siyabonga nakwiCeltic ngokumnika ithuba lokudlala. ULorenzo ufunde okuningi ezinyangeni ezingu-12 ezedlule nokuzomsiza njengoba ebuya eqenjini (kwiChiefs).”
UGordinho, okhushulelwe eqenjini elikhulu leChiefs ngoFebhuwari 2014, ubuyela kwiChiefs ngesikhathi esibucayi odongeni lwayo lwasemuva.
Ukubuya kwakhe kungenzeka kumethule umthwalo uMotaung kwazise bese kuqalile ukuvela imibono yokuthi athungathe esinye isitobha ngenxa yokuvuza kukaLucky Ngezana noMario Booysen abebejwayele ukudlala ndawonye ngaphansi kukaGiovanni Solinas -umqeqeshi oxoshiwe.
UBooysen useze waqanjwa igama elithi “Umnyango waseMall - uma usondela uyazivulekela”. Akusibo bodwa abashaya into ephansi kwazise noMulomowandau Mathoho noTeenage Hadebe, kuthe mhla benikwa ithuba kule sizini bakhombisa ukuba buthaka ngokwenza amaphenathi amabili.
Lawo maphenathi adlise iChiefs ngeLamontville Golden Arrows emdlalweni obuse Princess Magogo Stadium, KwaMashu.
NoDaniel Cardoso, abanye abathi ungcono akayiqalanga kahle isizini nokusho ukuthi uGordinho unendawo kwazise baningi abebevele bengahambisani nokubolekiswa kwakhe.
UGordinho unemidlalo engaphezu kuka-60 eqenjini elikhulu leChiefs kanti ushiye ewashaya namagoli amqoka ngezikhathi ezinzima kwiChiefs, ingenaye umgadli noma umdlali waphambili oyithemba lokubhakuzisa inethi. Empeleni abanye basole ngisho obengumqeqeshi weChiefs ngaleso sikhathi, uSteve Komphela, bethi mhlawumbe nguyena obenokungezwani noGordinho nokuhulele ekutheni aze abolekiswe. Ngisho sebehlangana kwiCeltic indaba ike yaba segudwini kuthiwa umdlali uzonqamula inkontileka yokubolekiswa abuyele kwiChiefs kodwa kwangenzeka.
UKUBUYA kukaLorenzo Gordinho azoqinisa udonga lweKaizer Chiefs kufuze ukuthi kuzobuyisa ithemba kubalandeli Isithombe: BACKPAGEPIX